सगुनको मिनी आइपीओमा लगानी गर्ने समय अब केही दिनमात्र बाँकी
काठमाडौं, चैत ७ । नेपालीले स्थापना गरेको अमेरिकी स्टार्ट अप इकमर्स कम्पनी ‘सगुन डटकम’ले सर्वसाधारणका लागि मिनी आइपीओ निस्कासन आगामी मार्च २७ तारिखबाट बन्द गर्ने बताएको छ ।
प्रवासी नेपालीले अमेरिकन दर्ता भएको कम्पनीले अमेरिकन सेक्युरिटी एक्सचेन्जबाट सेयर निगकासन गर्न स्वीकृतपछि धेरैले लगानी गर्न चासो देखाएका हुन् ।
आइटी कम्पनीहरुले राम्रो प्रगति गरिरहेको र नेपालीको ‘आइडिया’मा स्थापना भएको सामाजिक सन्जाल सगुनले विश्वभरबाट लगानी खुलाएको छ ।
नेपालबाट भने लगानी गर्न नसकेपनि विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीले लगानीको यो अवसरलाई सदुपयोग गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म मिनी आइपीओमा दुई हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणले लगानी गरिसकेका छन् ।
लगानीकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई आइतबार राति (नेपाली समय) अमेरिकाको वासिंगटन डीसीबाट ‘लाइभ’ सम्बोधन गर्दै लगानीकर्ताको चासो उत्साहप्रद रहेको सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले बताए ।
मिनी आइपीओ निस्कासन गरेपछि पहिलोपटक सार्वजनिक सम्बोधन गरेका यसका संस्थापक गिरीले सगुन आगामी पाँच वर्षभित्र १० अर्ब अमेरिकी डलरको कम्पनी बन्ने दाबी गरे ।
‘त्यतिखेर कम्पनीमा एक हजारभन्दा बढी कर्मचारी हुनेछन्’–उनले भने–‘ हामीले दुई करोड डलर वार्षिक आम्दानी गर्नेछौं । हाम्रा युजरको संख्या एक करोड नाघ्नेछ ।’
उनको दाबी पछाडिको तर्क यस्तो छ–‘हामी सगुनमा मोनोटाइजेसन गर्ने सिस्टम विकास गर्दैछौं’–गिरी भन्छन्–‘यो हाम्रो सबै सामाजिक सञ्जालभन्दा विल्कुलै फरक प्रोडक्ट हो ।’
त्यस्तै, सगुनले सोसियल डिजिटल स्मार्टकार्डको अवधारणा ल्याएको छ ।
सगुनले अब थप लगानी जुटाउने काम ब्रोकर डिलरले गर्ने उनले जानकारी दिए ।
‘ब्रोकर डिलरले संस्थागत लगानीकर्ताबाट थप लगानी जुटाउने छ’–उनले भने–‘त्यसका लागि हामीले सिलिकन भ्यालीमा काम गरिरहेको एक शताब्दी पुरानो इतिहास भएको कम्पनीलाई ब्रोकर डिलर नियुक्त गरेका छौं । उसले सजिलै हामीले लक्ष्य लिएअनुसारको लगानी जुटाउने विश्वास छ ।’
सगुनले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आइपीओ निष्कासन गर्न सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बन्द गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । ‘अबको एक महिनापछि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर निष्कासन गर्ने हाम्रो योजना छ’–उनले भने ।
‘अब ब्रोकर डिलरको हातमा लगानी जुटाउने जिम्मा पुगेकाले सर्वसाधारणका लागि लगानी गर्ने अवसर नआउन पनिसक्छ’–उनले भने–‘त्यसैले मौकाको सदुपयोग गर्न विदेशमा रहेका नेपालीलाई मेरो आग्रह छ ।’
सगुनले सेयर निस्कासन गरेपछि सर्वसाधारणले यसबाट कसरी आम्दानी गर्न सकिएला भन्ने जिज्ञासा राखेका छन् । सगुनका संस्थापक गिरी भने अर्को वर्षदेखि लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने कुरामा ढुक्क छन् ।
कसरी हुन्छ सगुनबाट कमाइ ?
यसमा गिरीको तर्क पत्यारिलो छ । उनकाअनुसार फेसबुकमा १ अर्ब ७० करोड रजिस्टर्ड युजर छन् । ह्वाट्स एपमा ९० करोड युजर छन् । आइपीओमा जाने तयारी गरिरहेको स्न्याप च्याटका ४० करोड युजर छन् । लिंक्डइनमा ४० करोड रजिस्टर्ड युजर र ३ करोड ५० लाख एक्टिभ युजर छन् ।
ती सबैमा मोनोटाइज गर्ने सिस्टम छैन । फेसबुक त्यतिधेरै युजर हुँदा पनि प्रोफिट लेवलमा पुगेको छैन । ह्वाट्सअपले मोनोटाइज गर्ने सिस्टम बनाएकै छैन ।
लिंक्डइनसँग यस्तो सिस्टम नभएर सुरुमा आइपीओमा जाँदा १०३ डलर प्रतिसेयर मूल्य भएको कम्पनी माइक्रोसफ्टलाई ४६ डलर प्रतिसेयर मूल्यमा बेच्नुपर्‍यो ।
विश्वव्यापीरुपमा आममानिसले औसतमा २ देखि ६ घन्टासम्म सामाजिक सञ्जालमा बिताउने गरेको गिरी बताउँछन् । त्यो फेसबुक, ट्वीटर, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, इन्स्टाग्राम जुनसुकैमा किन नहोस् । यसले समय ‘किल’ भइरहेको छ ।
त्यति समय बिताउँदा युजरले के पाए ? प्रोडक्ट सित्तैमा त पाए, त्यसको बदलामा उनीहरुको समयमात्र खेर गयो ।
‘हामीले युजरको समय सगुनलाई दिएपछि त्यसबापत उसले हाम्रो रेभेन्युको हिस्सा पाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट ल्याएका छौं’–गिरीले भने–‘सगुनले हरेक युजरले आफ्नो समय खर्च गर्दा जेनरेट गर्ने रेभेन्युको ५ प्रतिशत उसलाई दिने योजना बनाएका छौं ।’ उनले आम्दानी युजरलाई बाँड्ने सगुन पहिलो सोसियल नेटवर्क हुने दाबी पनि गरे ।
सगुनले यही वर्ष (सन् २०१७ भित्र) नेपाल र भारतमा पाइलट प्रोजेक्टकारुपमा आम्दानी बाँड्ने गरी स्मार्टकार्ड जारी गर्दैछ । ‘अर्को वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रै युजरलाई रेभेन्यु सेयरिङको काम सुरु गर्छौं’–गिरीले भने ।
सगुनले तीन तरिकाबाट आम्दानी गर्ने योजना बनाएको छ । एउटा फेसबुकले गर्नेजस्तो ब्यानर एडभर्टाइजिङ हो । यसमा सगुनले आफ्नो एप्लिकेसन्सको स्टोरीसँग म्याच हुने खालेका विज्ञापन राख्ने योजना बनाएको छ ।
अर्को कुरा सगुनको सोसियल स्मार्टकार्डले गिफ्टकार्डलाई रिप्लेस गर्न खोजको छ । जस्तो अमेरिकामा गिफ्टकार्डमा हरेक वर्ष एक अर्ब डलरभन्दा बढी खेरजाने गरेको छ । तपाइँलाई जन्मदिनमा साथीहरुले पाँचओटा गिफ्टकार्ड पठाए । कुनै ५ डलर, कुनै ५० डलरको गिफ्टकार्ड होला । तपाइँ व्यस्त दैनिकीबीच त्यसलाई प्रयोग गर्नै जानु हुन्न । गए पनि २० डलर, ५० डलरको कार्डमात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ । प्रयोग नभएको गिफ्टकार्ड वर्षको अन्त्यमा सरकारी ट्रेजरीमा जाने रहेछ । त्यसलाई कसैले पाएनन् ।
सगुनले त्यस्ता कार्डलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजेको हो । तपाइँले प्राप्त गर्नुभएको गिफ्टकार्डलाई सगुनको स्मार्टकार्डले स्क्यान गरिदिन्छ । त्यसमा कुन भेन्डरको कति मूल्यको कार्ड हो, हाम्रो लिस्टमा देखाउँछ । मोबाइलमा हुने डिजिटल कार्ड चौबीसै घन्टा तपाइँसँग हुन्छ । त्यसलाई जुनसुकै समय रिडिम गर्न सकिन्छ ।
अर्को, अमेरिकामा कुपन मार्केट अर्बौंको छ । जस्तो कुनै स्टोरमा गएर तपाइँले एक सय डलरको सामान किन्दा तुरुन्त २० डलरको कुपन पाउनुहुन्छ । उसले त्यति रकमको कुपन एक साताभित्रै अर्को खरिद गर्दा प्रयोग गर्न भन्छ । अहिले सामान किनेको मान्छे साता दिनभित्रै फेरि किन्न जाँदैन । त्यसो गर्दा कैयौं कुपन खेर जान्छन् ।
सगुनको स्मार्ट सोसियल कार्डले त्यस्ता कुपनको स्क्यान गर्छ । त्यस्तो कुपन परिवारका सदस्यलाई रिडिम गर्न दिन सकिन्छ ।
सगुनले मोबाइल एप ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘हामी २/४ महिनाभित्रै मोबाइल एप्लिकेसन ल्याउँदैछौं’–संस्थापक गिरीले भने–‘त्यसपछि हाम्रो वास्तविक युजर ग्रोथ सुरु हुन्छ ।’
मोबाइल एप ल्याउनेबित्तिकै यस वर्षभित्र ७० लाखसम्म युजर पुर्‍याउने सगुनको दाबी छ । त्यसपछि स्मार्टकार्ड आएपछि दुई वर्षभित्रै २ देखि अढाइ करोडसम्म युजर पुग्ने आफूहरुले आंकलन गरेको गिरीले बताए ।
पाइपलाइनमा धेरैओटा प्रोजेक्ट रहको बताउँदै उनले तिनलाई मूर्तरुप दिएपछि सगुनको युजर बेस निकै बढ्ने दाबी गरे ।
सगुनले अहिले मिनी आइपीओमार्फत् २ करोड डलरको सेयर निष्कासन गरेको छ । हरेक व्यक्तिले २३ डलर प्रतिकित्ताकादरले कम्तीमा १३ कित्ता सेयर किन्न सक्नेछन् ।
सगुनलाई अमेरिकी नियामक सेक्युरिटी एक्स्चेन्ज कमिसन (एसइसी)ले ‘जब्स एक्ट’अनुसार मिनि आइपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको हो । मिनि आइपीओ भोलि राम्रो प्रगति गर्ने सम्भावना भएका कम्पनीलाई विकासको चरणमा आवश्यकपर्ने रकम जुटाउन सेयर निष्कासन गर्न दिइने अनुमति हो ।
यसमा थोरै आम्दानी भएका व्यक्तिहरुलेसमेत लगानी गर्ने अवसर पाउँछन् ।
सेयर किन्न चाहनेहरुले सगुन डटकम/इन्भेस्टमा त्यहाँ दिइएको फर्म भरेर लगानी गर्न सकिन्छ ।
अमेरिकाबाहिर बसोबास गर्नेहरुले फर्म भरेर फर्ममा आएको मेलअनुसार बैकबाट वायर ट्रान्फर गरेर लगानी गर्नेछन् ।